Aqara oo soo bandhigtay dukaankeeda wax soo saarka ee Amazon Spain | IPhone News
Aqara waxay ka furatay dukaankeeda wax soo saarka ee Amazon Spain
Aqara waxay ka furatay dukaan wax soo saarka Amazon Spain, kaas oo leh Waxaan ku heli karnaa alaabtaada si fudud oo degdeg ah, ka faa'iidaysiga dhammaan faa'iidooyinka Amazon Prime iyo dammaanadkeeda.
Aqara ayaa maanta ku dhawaaqday dukaankeeda cusub ee Amazon Spain. Bogga internetka ee dukaanka online-ka ah ee aadka u weyn halkaas oo aad ka heli karto dhammaan alaabooyinka laga heli karo waddankeena. Waxaad had iyo jeer isticmaali kartaa mashiinka raadinta Amazon, laakiin adiga oo si toos ah u galaya dukaanka Aqara (isku xirka) waxaad ku raaxeysan doontaa faa'iidooyinka aad si toos ah uga iibsaneyso soo saaraha, oo leh dhammaan faa'iidooyinka Amazon Prime marka la eego dhoofinta degdega ah, dammaanadda iyo taageerada macaamiisha. Waxaa meesha ka baxay iibsiyadaas dukaamada Shiinaha oo toddobaadyo la sugayay si ay ugu raaxaystaan ​​alaabtooda, gobolkuna wuxuu beddelaa khiyaamooyinka iyo sidoo kale adapters-ka furayaasha aan Yurub ahayn. Hadda wax kasta oo aad ka soo iibsato Amazon Spain waxay noqon doontaa mid la jaan qaada dalkeena.
Gudaha buug-yaraha Aqara ee Amazon waxaan ku helnay qalab badan oo ku habboon HomeKit, Amazon Alexa iyo Google Assistant. Kanaalkayaga YouTube-ka waxaanu ku falanqeynay qaar badan oo ka mid ah alaabooyinkeeda si aan u dhigno gurigeenna: kamaradaha amniga, dareemayaasha dhaqdhaqaaqa, alaarmiga smart, shishadaha, nalalka iftiinka, xargaha LED-ka leeyihiin qiimo aad u xiiso badan. Sidoo kale, sida xayeysiinta bilawga ah waxaad ku iibsan kartaa alaabtooda qiimo dhimis 5% ah haddii aad isticmaasho code AMAZONITES markaad dukaanka wax ka iibsanayso. Xayeysiintu waxay socon doontaa ilaa Maajo 19 oo kuma jiraan kamaradaada cusub ee HUB G3.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » HomeKit » Aqara waxay ka furatay dukaankeeda wax soo saarka ee Amazon Spain